Ugcino lukaJP Morgan
Udidi: JP Morgan
Uhlalutyo lwamaxabiso eBitcoin: Abahlalutyi beJPM bacebisa Isizathu sokuBuya kweRally yamva nje
24 October 2021 | Ukuhlaziywa: 24 October 2021
Abahlalutyi bakaJP Morgan Chase, bekhokelwa nguNikolaos Panigirtzoglou, bapapasha umsebenzi wophando ochaza isizathu sangoku kutsha nje Bitcoin (BTC) ukugquma. Uphando luye lwachaza ukuba i-hype ejikeleze i-ETF ye-Bitcoin yokuqala e-US evunyelweyo ayiyiyo uxanduva lwe-rally, endaweni yoko ukunyuka kwamaxabiso kuqhuba i-BTC ukurekhoda iindawo eziphezulu.
Iindleko zezabelo ProShares Bitcoin Strategy ETF, izabelo zokutshintshana ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) namhlanje. Okwesibini, iValkyrie Bitcoin ETF (BTF), esungulwe kwi-NYSE ngoLwesihlanu odlulileyo.
Iqela lomhlalutyi weJPM liqinisekisile ukuba: Ngokwalo, ukumiliselwa kweBITO akunakulindeleka ukuba kubangele isigaba esitsha senkunzi entsha engena eBitcoin. Abahlalutyi bongeze ukuba:
“Endaweni yoko, sikholelwa ukuba umbono we-bitcoin njengothango olungcono lokunyuka kwamaxabiso kunegolide sesona sizathu siphambili sokwenyuka kwamanje, okubangela ukushenxa kwi-ETF zegolide ziye kwiingxowa-mali ze-bitcoin ukusukela ngoSeptemba.
IHype yokuqala kunye neBITO inokuphela emva kweveki. ”
Ixabiso le-BTC lifakwe kwirekhodi ephezulu ye-67,000 yeedola ekuqaleni kwale veki kodwa yehle kwinqanaba le-61,000 yeedola (ngexesha lokushicilela). Idigital cryptocurrency inyuke ngaphezulu kwama-40% ukusukela oko yaqala inyanga nangaphezulu kwama-90% oko kwaqala unyaka.
Amanqanaba aphambili eBitcoin aBukelwayo-Okthobha 24
I-BTC iwele ngezantsi kwe-62,000 60,000 yeedola kwindawo ebuyela umva kakhulu kwimeko egqithisileyo. Silindele ukulungiswa kwe-bearish kwi-63,000 yeedola okanye isezantsi kancinci kwiiyure ezizayo kunye neentsuku, kulandele ukubuyela kwindawo eyi- $ 64,000- $ XNUMX pivot.
Uqikelelo lwethu lwe-bullish luza njengoko i-4-iyure ye-MACD yehla iye kwinqanaba -570, ebonisa ukuba iimeko zentengiso ngoku zivuthiwe ukuze zibuyise ngokukhawuleza.
Nangona kunjalo, kwimeko yokuqhubekeka kwe-bearish engaphantsi kwe- $ 60,000, silindele ukuba i-59,000 yeedola yomgca iphindaphinde nakuphi na ukwehla.
Okwangoku, amanqanaba ethu okuchasana akwi- $ 66,000, i- $ 67,000, kunye ne- $ 68,000, kwaye amanqanaba ethu enkxaso aphambili ayi- $ 64,000, $ 63,000, kunye ne- $ 62,000.
Imali iyonke yentengiso: $ 2.51 zezigidi
I-Bitcoin Dominance: 45.3%
tags Bitcoin, BTC, Cryptocurrency, UJP MORGAN, iindaba, Uhlalutyo lobuGcisa
UJP Morgan Amabango oLawulayo e-Ethereum aXabisiwe
20 Septemba 2021 | Ukuhlaziywa: 20 Septemba 2021
UMlawuli oLawulayo webhanki yamazwe aphesheya i-JP Morgan Chase & Co, uNikolaos Panigirtzoglou, kutshanje utyhile ukuba uyakholelwa ukuba i-Ethereum (ETH) yimali yedijithali egqithisileyo.
Emva kokwenza iimetriki zovavanyo zomsebenzi wothungelwano, wacebisa inani elitolike ngcono ixabiso le-Ether. IPanigirtzoglou kunye neqela lakhe babeke oluqikelelo kwi-1,500 yeedola, ngama-55% asezantsi kunexabiso langoku lentengiso.
UMlawuli oLawulayo uqaphele ukuba i-ETH yahlangana ngenxa yethemba malunga nophuhliso lweprojekthi. UPanigirtzoglou uqaphele ukuba:
Sijonge i-hashrate kunye nenani leedilesi ezizodwa ukuzama ukuqonda ixabiso le-ethereum. Sizabalaza ukuya ngaphezulu kwe- $ 1,500. Kukho uphawu lombuzo apha. Ixabiso langoku libonisa ukunyuka okubonakalayo kokusetyenziswa kunye nokugcwala kwabantu okungenzeka kungabonakali. ”
UJP Morgan Ukhankanya ukulahleka koBume be-Ethereum njengeNqaku lokuThintela
Ngokweengxelo, olunye uphando lusisiseko salo siqinisekisiwe ukuba imbono emva kwe-Ethereum ilahlekile. Uphononongo luchaze ukuba uthungelwano luqalise umxholo weekhontrakthi ze-Smart kwishishini le-crypto. Nangona kunjalo, eli nqaku liye laba yinto eqhelekileyo kunogumbe wenethiwekhi, ebizwa “Ababulali bakaEthereum,” ujonge ukuba isabelo sentengiso kwi-market giant. UPanigirtzoglou uqaphele ukuba:
Ayisiyonto ikhethekileyo. Sele ubona ukhuphiswano oluvela eBinance, ukhuphiswano oluvela eSolana. Kwaye kuza kubakho ezingakumbi kwixa elizayo. ”
Ngelixa iinethiwekhi ezintsha zibeka isoyikiso sokwenene kulawulo lwayo, ifuthe lika-Ethereum kwintengiso linokubonisa ukuba kunzima ukugqitha. Nokuba inemali eninzi, uninzi lwezi projekthi zisebenza kwi-Ethereum ecosystem, ngakumbi ekwakheni imeko kulawulo lweemarike ze-Ethereum.
Ethetha ngesihloko, i-CEO ye-Skale Labs, uJack O'Holleran, uqaphele kudliwanondlebe ne-Insider ukuba:
"Ngaphandle kwentsebenziswano enkulu [ukwaziswa] kwamanye amakhonkco, sisabona uninzi lwabaphuhlisi [befumana] ukutsalwa kwi-Ethereum vortex."
tags Cryptocurrency, Ethereum, JPMorgan, iindaba
I-Bitcoin yokuPhelisa i-Bear Run xa i-Dominance Crossing i-50%: Uhlalutyo lwe-JP Morgan
4 Julayi 2021 | Ukuhlaziywa: 4 Julayi 2021
Umkhokeli ongumhlalutyi we-JP Morgan u-Nikolaos Panigirtzoglou ubeke amagqabantshintshi malunga nokuba ulindele ntoni Bitcoin (BTC) Ibhere ibaleka ukuya esiphelweni. Kudliwanondlebe lwakutsha nje ne-CNBC, umhlalutyi wathi i-Bitcoin izophinda ingene kwimarike yenkomo yakuba nje ulawulo lwayo lungaphezulu kwe-50%. UPanigirtzoglou uqaphele ukuba:
“Inani elisempilweni apho, ngokwesabelo se-bitcoin njengepesenti yetotali yemali yentengiso yemali, ngama-50% okanye ngaphezulu. Ndicinga ukuba sesinye isikhombisi ekufuneka sibukele apha malunga nokuba eli nqanaba lebhere liphelile okanye akunjalo. ”
Umhlalutyi okhokelayo we-JPM ukhumbule ukuba ulawulo lwe-BTC lwaluse-60% ekuqaleni kuka-Epreli, eqonda ukuba uphawu lwe-cryptocurrency olusezantsi lwentengiso luphawu olubi lokuba lukwimo yoloyiso. I-Panigirtzoglou icacisile ukuba le metric inyukile kwezi veki zimbalwa zidlulileyo, luphuhliso oluqinisekileyo.
Ngexesha lokushicilela, iBitcoin ithengisa nge- $ 35,500 kwaye ilawula i-45.3% yemarike iyonke ye-crypto. Ngelixa uPanigirtzoglou evuma ukuba bekungekho misebenzi mininzi yeminenga kwi-BTC kutsha nje, wathi:
"Ukungena kwemali ye-ethereum kuye kwacotha kwiiveki ezimbini ukuya kwezintathu ezidlulileyo, ngaxeshanye nokungena kwemali ye-bitcoin ... kuye kwaphucuka. Oko kuthetha ukuba kukho amathuba exabiso elihambelanayo abanye abatyali mali beziko abalibonayo ukuze bathenge i-bitcoin kwaye bathengise ezinye i-cryptocurrensets. ”
Amanqanaba aphambili eBitcoin aBukela-nge-4 kaJulayi
I-Bitcoin ibonakala ikwindlela yokubuyisela esempilweni njengoko eyona mali iphambili ibuyisa isithintelo se- $ 35k. I-BTC okwangoku ibonisa imisebenzi emikhulu ye-bullish ngaphandle komthamo wentengiso ophantsi. Ngexesha lokushicilela, ivolumu ye-BTC ixhonywe kumanqaku amancinci angama-69 ngaphandle kwespike esibukhali samva nje.
Nangona kunjalo, silindele ukuthengisa ivolumu ukuba ithathe kanye xa i-BTC ibuyisela uzinzo ngaphezulu kwe-axis ebaluleke kakhulu ye-36.5k- $ 37k axis. Okwangoku, i-cryptocurrency ebekiweyo ibekwe edabini ne-200 SMA, njengoko iibhere ziphulukana nokubambelela.
Okwangoku, amanqanaba ethu okuchasana akwi- $ 36,000, i- $ 36,500, kunye ne- $ 37,000, kwaye amanqanaba ethu enkxaso aphambili ayi- $ 35,000, $ 33,750, kunye ne- $ 33,000.
Imali iyonke yentengiso: $ 1.47 zezigidi
Imali yeNtengiso yeBitcoin: $ 664.9 billion
tags uhlalutyo, Bitcoin, BTC, Cryptocurrency, JPMorgan, iindaba
UJP Morgan ubhengeza ukuvulwa kwemisebenzi yabaPhuhlisi be-Ethereum kunye neBlockchain
22 April 2021 | Ukuhlaziywa: 22 April 2021
Emva kweminyaka eliqela yokuchasana nemali yokuchasana kwemali kunye nokubiza ubuqhetseba ngaxa lithile, ibhanki yotyalo-mali ye-behemoth uJP Morgan Chase & Co ibhengeze ukuba iqesha abaphuhlisi be-Ethereum kunye ne-blockchain development.
Uluhlu lwemisebenzi lwapapashwa kwiGlassdoor, umsebenzi owaziwayo wase-US kunye newebhusayithi yokugaya abantu. Ifemu iqaphele ukuba ijonge ukuqesha abaphuhlisi abanamava ekubhaleni iimvumelwano ezifanelekileyo, ukumiliselwa kwezicelo zeshishini, kunye nokuqinisekisa iiprothokholi ze-cryptographic kwi-blockchain.
Uphuhliso lwakutsha nje lutshintsho olumangalisayo kwinkampani ngokubhekisele kwi-cryptocurrensets, kuthathelwa ingqalelo indlela i-JPM ye-antithetical kwi-Bitcoin (BTC). kwi-2017, ngokudumileyo ichaze ukuba ii-asethi ze-crypto zazikhona “Mbi kuneebhalbhu zetayipi.” Ukwaqinisekisile ukuba uza kuphelisa ukuqeshwa kwakhe nawuphi na umsebenzi we-JP Morgan ojongana ne-cryptocurrensets.
Umphathi omkhulu weJPM Jamie Dimon
Ukubonelelwa kweBitcoin kuyaphuma
Ukuthunyelwa kwemisebenzi kutshanje kunokuba ngumqondiso wokuba i-JPM iyazibandakanya neziko lezemali lokuqeqesha u-crypto kunye ne-blockchain technology Ibhanki enkulu esekwe e-US iqaphele ukuba izakuqala ukujongana ne-cryptocurrensets kanye kwinqanaba elithile lemfuno kubathengi abafuna ukubonakaliswa kwe-crypto.
Kutshanje, u-JP Morgan ucebise abatyali-mali ukuba babele i-1% yeepotifoliyo zabo kwi-Bitcoin njengothango, eqaqambisa ukuhla konikezelo lwe-BTC ngenxa yokuthengwa kwabatyali mali. I-Glassnode isandula ukuveza ukuba ubonelelo lolwelo luyehla njengoko iminenga kunye nabavukuzi beqokelela kwaye bonyusa ukubamba kwabo.
Iingxelo zibonisa ukuba malunga ne-78% yazo zonke i-Bitcoin ezisasazwayo ilahlekile okanye i-HODLed, ishiya imilinganiselo ye-4 yezigidi ze-BTC kurhwebo. Umzekelo wokugcinwa kweziko leBitcoin yiGreycale, ngoku ephethe i-BTC eyi- $ 36 yezigidigidi. Kutshanje uGreycale utyhile ukuba une- $ 50 yezigidigidi kwiiasethi zizonke eziphantsi kolawulo.
tags Bitcoin, Cryptocurrency, Ethereum, JPMorgan, iindaba